गृह प्रशिक्षण कार्यक्रम र आहारमा काम गर्ने - विधि मक्का
विधि मकिया: उच्च अन्तराल तीव्रता प्रशिक्षण र केटोजेननिक आहार कस्तो छ?
विधि मकिशिया फिनल्याण्डमा विकसित गरिएको व्यायाम अनुप्रयोग हो, जुन दुई वर्षमा यसको गृह देशमा एक लोकप्रिय अवधारणा भएको छ।. प्रणालीले चुनौतीपूर्ण व्यायाम योजना प्रदान गर्दछ जुन घर वा जिममा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ. व्यायामको कठिनाईले स्वचालित रूपमा वृद्धि गर्छ जब प्रशिक्षण. विधि मकिशियाले पनि आहार समावेश गर्दछ जहाँ हजारौं प्रयोगकर्ताहरूले आदर्श वजन पाएका छन् र उनीहरूका खाने बानी सुधार गरेका छन्.
आहार मकिया को आहार इतिहास
म मेरो सम्पूर्ण जीवन अभ्यास गरिरहेको छु, तर लगभग 35-40 वर्षको उमेरमा मेरो शरीरले वसा जमाउन थाल्यो. परिवर्तन अनियमित भयो र नपढिएको. समुद्र तटमा सुन्दर गर्मीको दिनमा लिइएको तस्विर मेरो आँखा खोलियो.
मैले आफैलाई अत्यन्तै कमजोर बनाएँ, तर तस्विर देख्न पछि मैले मापदण्डमा गएर मेरो आश्चर्यलाई ध्यान दिएर मेरो वजन अझ बढेको छ।. म सोचिरहेको थिएँ कि गलत हुन सक्छ.
मैले कम-मोटो फैलावट खाए, कम-मोटो दही, स्किम दूध, कृत्रिम मीठो नरम पेय, कम-मोटो चीज, कम-मोटो सलाद ड्रेसिंगको साथ सब्जिहरु, धेरै प्रोटीन र केवल दुबला मासु. मेरो विचारमा मैले सामान्य दिशानिर्देश अनुसार स्वस्थ खाए. केही गलत थियो, खराब गल्ती.
मैले मेरो कोलेस्ट्रॉल मूल्यहरू मापन गरे, र तिनीहरू असल थिएनन्. खराब कोलेस्ट्रॉल धेरै उच्च थियो र राम्रो धेरै कम थियो. सल्लाहको लागि सोध्दा, मैले आहारबाट बोसो कसरी कम गर्ने भनेर निर्देशन दिए.
मेरो आहारबाट कसरी बोसोलाई कम गर्न सक्छु? यसबाहेक, मलाई सल्लाह दिनुभएका व्यक्ति मैले भन्दा भन्दा बढी थोरै थियो. दुविधा जन्मेको थियो.
त्यसपछि मैले एक व्यवसायमा काम गरेँ जहाँ शरीरको फिजियोलोजीको ज्ञान आवश्यक छ. मलाई राम्रो शिक्षा थियो र समस्या समाधान गर्न आधारभूत ज्ञान थियो. मैले शरीरको चयापचयलाई अझ बढी अन्वेषण गर्न थाले. मैले पत्ता लगाए जब शरीर कार्बोहाइड्रेट प्रयोग गर्दछ र जब बोसो जलाउँछ. मलाई अपेक्षाकृत छिटो लाग्यो कि एक प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट बिना उच्च कार्बोहाइड्रेट र उच्च प्रोटीन आहारले शरीरलाई एक राज्यमा लैजान्छ जहाँ सबै ऊर्जा बरामद हुन्छ र मोटो जलायो शायद नै हुन्छ।. यदि आहारबाट क्यालोराजको मात्रा पनि थोरै धेरै छ र मोटाई जलिरहेको हुँदैन, परिणाम प्राकृतिक वजन हो.
मलाई डाक्टर संग परिचित भयो. Atkins आहार. यो एकदम विवादास्पद र अपमानजनक आहार हो, तर आधारभूत विचार एकदम सही छ. यसको साथमा, विश्वभरका लाखौं व्यक्तिहरूले सामान्य वजनमा पुगिसकेका छन्. शरीर आहार द्वारा एक राज्य मा फैलिएको छ जहाँ लगभग सबै ऊर्जा वसा देखि उत्पादन गरिन्छ. शरीर एक निरन्तर मोटो जलिरहेको अवस्थामा छ, र उपवास भन्दा कम वजन कम हुन्छ. यस प्रणालीले आहारमा वसा र प्रोटीन को मात्रा पर्याप्त छ भनेर सुनिश्चित गर्दा यो भण्डारणले भण्डार गरिएको मोटो जलाउँछ. यसको अतिरिक्त, यो सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईं पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त गर्नुहुन्छ, जसबाट शरीर ले ग्लूकोज बनाउँछ.
मैले एटकिन्स आहार सुरू गरे, र नतिजाहरु अचम्मलाग्दो थिए. केही महिना भित्र, मैले धेरै थोरै संचय गरे भन्दा बढी वसा छुट्यो. मैले 33 पाउण्ड भन्दा बढी गुमाएँ. यसबाहेक, मैले मेरो अनुहारमा चाउचाउबाट छुटकारा पाएको छु कि मैले सोधे कि म मेरो काममा श्वेतकर्मीको कारण थियो. त्यस समयमा, मैले मेरो पहिलो शरीरको अभ्यास सुरू गरेँ, र मैले मांसपेशी जनको निर्माणमा उनको प्रभाव देखेको थिएँ.
विधि मकिया एक प्रारम्भिक स्पार्क पाईयो
मिडियाले केही वर्ष पहिले एट्किन्स आहारको खतराबारे सबैलाई मिलाएको छ किनकि यसको साथमा तपाईं केवल बेकन, मक्खन र अण्डा उपभोग गर्नुहुन्छ।. धेरै मानिसहरूले जानकारीका साना अन्नको आधारमा "एटकिन्स आहार" लाई सुरू गरे, फलस्वरूप पसलहरू मक्खनबाट भागियो।. एक राम्रो ज्ञानको आधार बिना, तथापि, केनेजनिक आहार असफल छ, र परिणामहरू खराब वा विनाशकारी छन्।. Atkins आहार ketogenic छ, र यदि ठीक छ पछि, तपाईं धेरै सब्जियों, प्रोटीन को मामूली मात्रा र राम्रो वसा को उपभोग.
तथापि, विधि मकियाको केजेजनिक आहार संग तपाईं साधारण कार्बोहाइड्रेट को छोडेर, लगभग कुनै अन्य शुद्ध खाना खा सकते हो. सब्जको मात्रा सधैँ आधा प्लेट हुन्छ, त्यसैले उनीहरूको साझा सामान्य सामान्य आहार भन्दा उच्च छ.
धेरै वर्षहरूमा मैले केजनजन्य आहार सुधार गर्न प्रयोग गरे. मेरो रोजगारीको कारण, मैले मेरो रगतको वास्तविक-समय मानहरू प्राप्त गर्ने मौका पाएको थिएँ. विधि मेकि रिबुट क्यानजेजिक वजन घटाने कार्यक्रमको नवीनतम संस्करण हो. यो एटकिन्स विधिबाट उत्पन्न भएको छ, तर यसमा महत्त्वपूर्ण सुधारहरू छन् जुन मोटो बोसो जलाइदिन्छ.
विधि मेकि रिबुट हो, यसैले, एक केटोनिकल अस्थायी आहार जसको साथ तपाईंले वजन गुमाउन सक्नुहुन्छ. तपाईं आदर्श वजन सम्म पुग्नु भएको छ, तपाईं सम्पूर्ण परिवारको लागि एकदम सही हो कि सामान्य विधि मक्का बेसिक आहारमा जानुहुन्छ.
विभिन्न वजन घटाने कार्यक्रमहरूमा समस्या अक्सर यो तथ्यमा समावेश गर्दछ कि परिवारमा कसैको तयारी गर्न र आफ्नै भोजन चाहिन्छ. विधि मकिशियाको आधारभूत आहार डिजाइन गरिएको छ ताकि सारा परिवारले खाना खाउन सक्छ. यदि केहि परिवार सदस्य कोटेजननिक अवस्था सम्म पुग्छ को कोशिश गर्दछ, त्यो या सिर्फ एक अलग कार्बोहाइड्रेट भाग छोड्छ. अन्यथा, आहार सबैको लागि समान हो.
अन्तिम वर्ष मैले विधि मकिशिया नेट अनुप्रयोग विकास गरिरहेको छु. वर्षौंसम्म मैले विधि मक्काको आधारभूत आहारको पालना गरेँ तर यस विशाल कामको सुरुवातमा मैले जानबूझेर साधारण कार्बोहाइड्रेटहरू जस्तै बन्स, हल्का रोटी, आलु, मिठाइहरू थपेँ, र मैले तेलको अतिरिक्त पनि छोडिदिएँ।. तथापि, मेरो वजन बढ्यो हातबाट बाहिरियो र 183 पाउण्ड देखि 208 सम्म उठ्यो. एक वर्षमा6पाउन्ड. मेरो उद्देश्य नवीनतम केजेजनिक आहार प्रकार्य परीक्षण गर्न थियो. साधारण कार्बोहाइड्रेटका प्रभावहरू आशा भन्दा बढी टाढाको थियो, र उनीहरूको रकम निकै गाह्रो थियो. परिणाम मैले भन्दा बढी भन्दा ठोस थियो.
01. 01. 2015 मैले विधि मेक रिबुट गरे. दुई महिनामा मेरो वजन 176 मा घट्यो.4पाउण्ड, त्यसैले वजन घटाने कार्यक्रमको मेरो नवीनतम संस्करण धेरै प्रभावकारी छ. एक विचलित 32. दुई महिनामा2पाउन्ड! निकै ठूलो आवाज, तर वजन घटाँदा, मैले पनि एक पटक भोकाको अनुभव गरेन. मेरो शरीर सधैँ पर्याप्त ऊर्जा पाईन्छ र मैले सधै राम्रो लाग्यो. मैले पनि विधि मकिशियालाई नियमित रूपमा प्रयोग गरे. केटोजन्य आहारको समयमा, मानिसहरूले सामान्यतया व्यायाम गर्न सक्छन्.
विधि मक्का रिबूट सुरु गर्नु अघि ज्ञान प्राप्त गर्नु आवश्यक छ. सूचना प्याकेजले सबै तथ्याङ्कहरूलाई सुरक्षित किनेजनेन वजन घटाने कार्यक्रम सुरु गर्न को वर्णन गर्दछ. केटोजिनिक वजन घटाने कार्यक्रम, जब ठीकसँग कार्यान्वयन गरिन्छ, सुरक्षित र धेरै प्रभावकारी हुन्छ. तथापि, बिना राम्रो पृष्ठभूमि ज्ञान र प्रतिबद्धता, तपाईंले पनि सुरु गर्नु हुँदैन.
साथै, यो उल्लेखनीय छ कि यदि तपाईसँग सामान्य वजन छ भने केटेजनन आहार सुरू गर्न छैन. त्यस अवस्थामा, तपाईंको शरीरले राम्रो काम गर्दछ, र तपाईंलाई विधि मक्का रिबूटको आवश्यकता छैन, तर केवल एक मौलिक आहार मिठाईको इच्छालाई रोक्न र भूखको भावना कम गर्न पर्याप्त छ।.
अन्तमा, मैले सबै समयका बुद्धिमानी पुरुषहरूलाई उद्धृत गर्नेछु, जसको भन्नाले मेरो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो यो सूचना प्याकेज तयार गर्न.
"यदि तपाईं स्पष्ट रुपमा यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्न भने, तपाईं यसको बारेमा पर्याप्त थाहा छैन. "
जे. A Source . Needlehill, विधि विधि